PSG oo qarka u saaran in ay dhulka ku jiido kooxaha Manchester City, Barcelona iyo Bayern Munich – Gool FM
(PSG) 07 Dis 2018. Laacibka 21 jirka ah ee reer Holand iyo kooxda Ajax Frenkie de Jong ayaa lala xiriirinayay saxiixiisa xiliyadii lasoo dhaafay kooxaha Manchester City, Barcelona iyo Bayern Munich.
Laakiin kooxda reer France ee Paris-Saint-Germain ayaa u muuqata inay ku guuleysatay tartanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Frenkie de Jong.
Wargeyska “Telegraph” ee dalka England ayaa wuxuu sheegay in Paris-Saint-Germain ay kugala biirtay kooxaha xiiseenaya adeega Frenkie de Jong, iyagoo qorsheenaya in suuqa xagaaga ee soo aadan ay kasoo dajiyaan garoonka Parc des Princes.
21 jirkaan ayaa si aad ah loola xiriirinayaa kooxo ay ka mid yihiin Manchester City, Barcelona iyo Bayern Munich, laakiin PSG ayaa u muuqata inay ku guuleysatay tartanka saxiixa xiddiga reer Holland.
Wafdi ka socda Paris St Germain ayaa waxay gaareen Amsterdam si ay kala heshiiyaan kooxda Ajax in saxiixa Frenkie de Jong ay ku qaataan qiimo dhan 75 milyan euro.
Wargeyska ayaa xaqiijiyay inay hayaan sawirada wafdiga ka socday kooxda Paris St Germain oo la hadlaya wakiilka ciyaaryahankan reer Holand, iyadoo hadana la kulmaya agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Ajax Marc Overmars.
Kooxda Paris St Germain ayaa waxay dooneysaa in heshiiskan ay kusoo gaba gabeyso sida ugu dhaqsida badan, kadib markii uu dhawaan xidigooda Kylian Mbappé sheegay inuu jeclaan lahaa imaatinka Frenkie de Jong ee kooxda PSG.
Wargeyska “Telegraph” ee dalka England ayaa wuxuu dhinaca kale sheegay in Frenkie de Jong uu doorbidayo ku biirista Kooxda Paris St Germain, marka loo fiiriyo yaboohyada kala duwan uu ka helayo kooxaha kale.